पांडा भालु: प्रेम र आतंक बीच | यात्रा समाचार
मारिया जोस रोल्डन | | चीन, आराम, एशिया यात्रा
विश्वको सब भन्दा ठुलो देश चीनको मातृ पशु रहेको छ जुन लगभग ईश्वरीय मानिन्छ: पाण्डा भालु, मांसाहारी स्तनपायी यस पूर्वी देशको हो। तिनीहरू चिडियाखानीहरूमा धेरै स्थानीय भ्रमण गर्दछन्, तर अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरूमा पनि। पांडा भालु यति लोकप्रिय छ कि यो विश्व कोषको लोगो हो जसले पशुहरू, WWF लाई सुरक्षा दिन्छ।
सबैलाई थाहा छ कि यस जनावर हाल विलुप्त हुने खतरामा छ। धेरै चोटि यो शान्त र निर्दोष जनावर जस्तो देखिन सक्छ, तर अन्य पटक यो हाम्रो ग्रह पृथ्वीमा अवस्थित सबैभन्दा खतरनाक मध्ये एक हुन सक्छ।
1 पाण्डा भालु
2 पांडा को दुश्मन
3 पान्डास आक्रमण गर्छन्?
4 पाण्डा भालु Gu Gu को बारेमा समाचार
5 पाण्डा भालु Gu Gu
पाण्डा भालु एक सुन्दर, ठूलो जनावर हो कि निस्सन्देह एक विशाल भरिएको पशु जस्तो देखिन्छ, तर यो बाहिरी रूप भन्दा धेरै हो। पाण्डा भालुको बाँसको लागि तृष्णा भोक हुन्छ, यो सामान्यतया आधा दिन खान्छ: कुल १२ घण्टा खाने। ऊ सामान्यतया १ daily किलो बाँस खान्छ र आफ्नो दैनिक आहार सम्बन्धी आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नलाई आफ्नो कलाईको हड्डीहरूसँग काण्ड काट्छ, जुन लम्बाई र औंठहरू जस्ता कार्य गर्दछ। कहिलेकाँही पाण्डाहरूले चराहरू वा कृन्तकाहरू पनि खान सक्छ।
जंगली पाण्डा प्रायः मध्य चीनको दुर्गम, हिमाली क्षेत्रहरूमा बस्छन्। यो यस्तो छ किनकि यी क्षेत्रमा त्यहाँ बाँसको सब भन्दा बढी ज and्गलहरू छन् र ती ताजा र आर्द्र तरिकामा उनीहरूसँग यो बोट छ, जुन उनीहरूलाई मनपर्दछ।। पाण्डाहरू चढाई र माथि चढ्न सक्छन् पोषण गर्न जब बिरूवाहरू विरलै हुन्छन्, जस्तै गर्मीमा। तिनीहरू सामान्यतया आरामसँग बस्दछन् र आफ्ना पछाडिको खुट्टा फैलाएर बस्दछन्। यद्यपि तिनीहरू आसीन देखिन्छन् किनकि तिनीहरू विशेषज्ञ रूख पर्वतारोही र धेरै कुशल पौडी खेल्ने छन्।
पाण्डा भालु तिनीहरू एक्लो छन् र गन्धको उच्च विकसित भावना छविशेष गरी पुरुषहरूमा अरूलाई भेट्नबाट जोगिन र यसरी महिला पत्ता लगाउन र वसन्तमा जोडी गर्न सक्षम हुन।
जब महिला गर्भवती हुन्छन्, तिनीहरूको गर्भावस्था पाँच महिना हुन्छ र तिनीहरूले एक वा दुई बच्चाहरूलाई जन्म दिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू एकैचोटि दुईको वास्ता गर्दैनन्। पाण्डा बच्चाहरू अन्धा र जन्ममा धेरै सानो हुन्छन्। पाण्डा शिशुहरू तीन महिनासम्म क्रल गर्न सक्दैनन्, यद्यपि तिनीहरू सेता भएर जन्मेका हुन् र पछि कालो र सेतो रंग पछि विकास हुन्छन्।
आज ज the्गलमा करिब १००० पाण्डा छन्, चिडियाखानामा करिब १०० बाँचिरहेका छन्। पाण्डसको बारेमा आज सबै कुरा थाहा छ कैदमा परेकालाई धन्यवाद छ किनकि जंगली पाण्डाहरू पुग्न गाह्रो छ। जे होस्, पान्डा भालुका लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँ, कुनै पनि जनावरको लागि, यसको निवासमा छ र चिडियाखानामा होइन।
पांडा को दुश्मन
तिनीहरूसँग प्रायः धेरै शत्रुहरू हुँदैनन् किनभने त्यहाँ प्रायः कुनै सिकारीहरू हुँदैन जुन तिनीहरूलाई खान चाहन्छ। तापनि उसको मुख्य शत्रु मानिस हो। त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू छन् जुन पनीडा तिनीहरूको अनौंठो छाला र रंगहरूको लागि शिकार गर्न चाहन्छन्। मानव विनाशले उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानलाई जोखिममा पार्दछ र यो नै सबैभन्दा ठूलो खतरा हो र यसले उनीहरूलाई लोप हुने अवस्थामा पु .्याएको छ।
अर्को शत्रु हिउँ चितुवा हुन सक्छ। यो सिकारी हो कि पाण्डा शावहरूलाई मार्न सक्छ जब आमा उनीहरूलाई खानको लागि विचलित हुन्छ। तर जब आमा त्यहाँ हुन्छन्, चितुवाले आक्रमण गर्ने आँट गर्दैन किनभने यो जान्दछ कि यो सजीलै पराजित हुनेछ।
पान्डास आक्रमण गर्छन्?
पाण्डा हमलाहरू विरलै हुन्छन किनकि उनीहरु मानिस र उनीहरु बस्ने ठाँउबाट टाढा छन्। कुनै जंगली पान्डाको मानिससँग विरलै सम्पर्क हुन्छ, यद्यपि क्रोधित पाण्डा किनकि यो उक्साइएको छ वा किनभने यसको युवा विचलित भएको छ आफैको पक्षमा आक्रमण गर्न सक्छ।
चिडियाखानामा, पाण्डा भालु मनमोहक हुन् तर यो दुर्लभ भए पनि, तिनीहरूले आक्रमण गर्न सक्छन् यदि तिनीहरूले आक्रमण गरे वा विचलित महसुस गरे भने।। यदि तिनीहरू टेडी भालु जस्तो देखिन्छन् भने पनि उनीहरू अरू कुनै जंगली जनावर जत्तिकै आदर हुनुपर्छ।
पाण्डा भालु Gu Gu को बारेमा समाचार
धेरै अवसरहरूमा पाण्डस भालुहरूको बारेमा आएको समाचारहरू अविश्वसनीय हुन्छन्। धेरैलाई पचाउन गाह्रो लाग्छ कि यस्तो हानिकारक जनावर असाध्यै कठोर छ। त्यस्तै एउटा समाचार २ 28 बर्षे झाhang Jiao लाई के भयो। उसको छोरोले उसको खेलौना खसाल्यो जहाँ गु गु नामको पाण्डा भालु थियो, र यसलाई पुन: प्राप्ति गर्न को लागी प्रयास गर्दा, उनले त्यसबाट कडा आक्रमण गरे।
श्री जिओले जनावरले उसको खुट्टामा बिट लगाएझैं पीडा भोगे, तर सबैमा आश्चर्यजनक कुरा के भने यो हो कि उनले क्षतिको प्रतिकार गर्न केहि पनि गरेनन्। किन? ठिक छ किनकि धेरै ओरिएन्टलहरू जस्तै, पांडा भालुको लागि ठूलो सम्मान छ, जसलाई उनले राष्ट्रिय खजानाको रूपमा आदर गर्छन्। उनी आश्वासन दिन्छन् कि ती राम्रा छन् र उनी खुशी छन् कि उनीहरू सधै रूखमुनि बाँस खाइरहेका छन्। अझ आश्चर्यका लागि कस्तो मनोवृत्ति!
सबैमा सब भन्दा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यदि चिडियाखानाले इच्छा गर्दछ भने, यसले Zhang Jiao विरूद्ध कानुनी कारबाही गर्न सक्छ किनभने पांडा भालु क्षेत्र जस्ता व्यक्तिहरूको लागि प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो।
पाण्डा भालु Gu Gu
यो उल्लेख गर्नु महत्वपूर्ण छ कि Bear Gu Gu पहिले नै मानव हमला गर्ने इतिहासको साथ आएको थियो। झाhangको साथ यो दर्दनाक घटना हुनुभन्दा एक वर्ष अघि प्रश्नको रूपमा जनावरले १ fifteen वर्षको नाबालिगलाई आक्रमण गरेको थियो जुन ठाउँ पशुको ठाँउमा पुगेको थियो। र केहि वर्ष पहिले, उनले एक मतवाला विदेशीलाई आक्रमण गरे किनभने उनले उसलाई अ h्गालो।
निश्चित रूपमा जनावरहरू सहज छन् र खुशीको लागि आक्रमण गर्दैनन् तर किनभने उनीहरू डराउँछन् र यो उनीहरूको एक मात्र प्रकारको रक्षा हो। जे होस्, ती सबैलाई लाग्छ कि पांडा भालु एक प्रकारको भरपर्दो पशु हो, शान्त र मीठो प्राणी हो, उनीहरूले पहिले नै सतर्क रहनु र चिडियाखानाहरूको निर्देशनलाई सम्मान गर्नु राम्रो छ भनेर देखिसकेका छन।
के तपाईंलाई थाहा छ लगभग $ १०० को लागी तपाईमा पांडा भालु नजिक हुन र यसको अन्तरक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ? हो, यो भनिन्छ कि राम्रो संग हुर्काइएको छ र एक आरक्षित स्थान मा प्रशिक्षित तिनीहरू धेरै मैत्री छन्। तर यो कहिलेकाँही उत्तम हो तिनीहरूलाई शान्त र स्वतन्त्र छोड्नुहोस् उनको कुनै पनि आक्रमणलाई सहनु हुँदैन, जसले उनको जीवनभर विनाशकारी विनाश निम्त्याउन सक्छ, वा अझ खराब, मृत्युहरू।
तपाईलाई पहिल्यै चेताउनी दिइएको छ, उनीहरूलाई भेट्नुहोस् तर कृपया ध्यान दिएर र मायाका साथ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » चीन » पांडा भालु: प्रेम र आतंक बीच
मेरो ईश्वरको साथ भन्यो
एक महान पोष्ट! मैले यो मेरो year बर्षे भतिजाको साथ पढेको छु किनकि हामी पाण्डैले मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने भनेर श doubts्का थियो।
यस्तो पूर्ण प्रकाशनका लागि बधाई छ, यसले हामीलाई पाण्डाको बारेमा धेरै सिक्न मद्दत गरेको छ! धन्यवाद! 🙂
मेरो ईश्वरको साथ जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो लेखन, धेरै राम्रो सत्य, म पाण्डस दुश्मनी हुन सक्छ कि छैन भनेर पनि धेरै उत्सुक थिएँ, जे होस् स्पष्ट रूपमा ती उर्सिदे परिवारबाट हुन सक्छ, २०० किलो भन्दा बढी तौलको भालुले तपाईलाई एक झटका चोटले धेरै क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यसको पञ्जा सत्य हो, चीनले मानिसकै अधीनमा रहेको सब भन्दा ठूलो क्षेत्र भएको देश हो तर रुस हुने सब भन्दा ठूलो होईन
थियो लाई जवाफ दिनुहोस्
पाल्मीरा, सिरियाको मरुभूमिको आश्चर्य